Girl’s High School Mystery Class – Variety Myanmar
Girl’s High School Mystery Class
Watch full episodes Girl’s High School Mystery Class, download Girl’s High School Mystery Class english subbed, Girl’s High School Mystery Class eng sub, download Girl’s High School Mystery Class eng sub, stream Girl’s High School Mystery Class at Variety Myanmar.
Status: Ongoing Released: 29 Jan 2021 Duration: 40 min Country: South Korea Type: Drama Director: N/A Casts: Do-Yeon Jang, Kim Hyung-Seo, Lee Eun Jae, Ye-na Choi Posted by: Thomas Nicolas Released on: April 3, 2021 Updated on: June 3, 2021
Watch streaming Girl’s High School Mystery Class English Subbed on Variety Myanmar. You can also download free Girl’s High School Mystery Class Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Girl’s High School Mystery Class on Variety Myanmar MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.
Synopsis Girl’s High School Mystery Class
“ဆယ်ရာ အမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်း”ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးက အထက်တန်းလွှာ လက်ရွေးစင် ကျောင်းသူတွေသာ တက်နိုင်ပြီးတော့
လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အများကြီးနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ့် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်..
ဂျန်းဒိုယွန်း၊ ဘီဘီ၊ ချွဲရယ်နာ (Iz*One မန်ဘာ)၊ ဂျေးဂျေးနဲ့ ပတ်ဂျီယွန်းတို့က
ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ ငါးယောက်က ဆယ်ရာကျောင်း ဆရာဆရာမတွေဟာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားကြမှန်း သတိထားမိလာတဲ့အခါ
သူတို့ငါး​ယောက်စုပေါင်းပြီးတော့ သဲလွန်စတွေလိုက်ရှာကြရင်း လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်….
Story line ကောင်းကောင်း၊ ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ Plot Twists တွေနဲ့ တစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်း ဇာတ်ရှိန်တက်လာမှာပါ
အထူးသဖြင့် “Mystery Adventure Series” ကြိုက်တဲ့သူတွေ လက်မလွတ်သင့်တာ အသေအချာပါပဲ….
အပိုင်း ၁၆ပိုင်း ပါဝင်ပြီးတော့ အပတ်စဉ် စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦး။
Synopsis – Aung Zayya Kyaw
Translator : Soe Min Thein & Aung Zayya Kyaw
Video Source : 1080p-WEB-DL
Watch Girl’s High School Mystery Class
Girl’s High School Mystery Class Ep 3